Thursday December 06, 2018 - 17:43:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya duleedka deegaanka Jaziira ayaa sheegaya in qarax lala eegtay gaari nuuca dagaalka ah uu sababay khasaaraha lixaad leh, saraakiisha qaraxa ku dhintay waxaa kamid ah Jeneraal Cumar dheere oo ahaa taliyaha qeybta 12-aad ee ciidamada melleteriga dowladda Federaalka Soomaaliya.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo katirsan ciidamada dowladda "Taliyihii qeybta 12-aad ee ciidanka Murtadiinta Cumar dheere iyo abaan duuliyihiisi iyo 8 askari ayaa ku dhintay qarax mujaahidiintu kula beegsadeen duleedka deegaanka Jaziira" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Sidoo kale saraakiishii ku dhintay qaraxii maanta waxaa kamid ahaa abaan duulihii ciidamada dowladda ee deegaannada Xeebta Ninka lagu magacaabo Cabdi Cali jamaame
Ilo wareedyo madax banaan ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo madax u ahaa ciidamada ku sugan deegaannada Dhanaane iyo Marka ay kamid ahaayeen askartii ku dhimatay qaraxii maanta.
Jeneraal Cumar dheere ayaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf kasoo noqday wasiirka wasaaradda G/dhigga intii u dhaxaysay sanadihi 2004 illaa 2005 wuxuuna markii dambe ka mid noqday saraakiishii ciidamada DFKM ee Xabashida Itoobiya usoo gelbiyay gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.